Ardayda Filimka ee Prague's FAMU Ka hel cashar maqal ah oo leh Calrec's Brio Console | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » Ardayda Filimka ee Prague's FAMU Ka hel cashar maqal ah oo leh Calrec's Brio Console
Ardayda Filimka ee Prague's FAMU Ka hel cashar maqal ah oo leh Calrec's Brio Console
HEBDEN BRIDGE, UK, DECEMBER 3, 2019 - Dugsiga Filimka iyo TV-ga ee Akadeemiyada Farshaxanka (FAMU) ee Prague waxay iibsatay qalab koronto-dijital ah oo ugu horreeyay - Brio36 - kana yimid Calrec. Waxaa loo istcimaalay mashaariic kala duwan, ooy kujiraan bedelida wadahadalada otomaatiga ah / codka maqalka qolka duubista iskuulka.
Martin Kebrdle, oo ah Madaxa Qeybta Suuqa codka ee FAMU, ayaa sharraxay in iskuulku uu ubaahan yahay kursi firfircoon oo loo isticmaali karo AVID Qalabka Pro ee dhowr barnaamijyo ah. Console-ku wuxuu ku xiran yahay Qalabka Pro ee wata kaararka MADI. Mustaqbalka, waxaan qorsheyneynaa inaan ku darno isku xirnaanta Calrec ee Hydra2. Console waa kufiican yahay baahiyaheena; Waa isku dhafnaan wayna u noqotay si fudud ardayda si ay wax u bartaan - taas oo ahayd wax barakeysan ilaa tani waa markii ugu horreeysay oo badankood ay adeegsadaan qalabka wax lagu dhageysto ee dhijitaalka ah. Brio waa hordhac weyn oo adduunka ah oo duubista maqalka ah ee ardayda loogu talagalay. ”
FAMU waa dugsiga shanaad ee ugu da'da weyn adduunka oo lagu aasaaso 1947. Iyada oo qayb ka ah Akadeemiyada Cilmiga Fanka ee Prague, FAMU waxay ka kooban tahay kow iyo toban waaxood, halkaasoo ardaydu ku gaadhi karaan shahaadada koowaad ee jaamacadda, ama heerka labaad ee edbinta filimada waxaana ka mid ah: jiheynta, dokumenti filimada, qorista qoraalka, riwaayadaha, filim jilicsan, shaneemo, naqshad maqal ah, tafatirid, soo saarid, sawir qaadis iyo Xarunta Dhexe ee Daraasaadka Maqalka. Brio waxaa lagu rakibay qolka jihada codka ee dugsiga. Iibinta iyo rakibida waxaa gacanta ku hayey shirkadda Calrec, Mediatronik SRO
Mike Reddick, Maamulaha Iibka Caalamiga ah, Calrec ayaa yidhi: "Xaqiiqda ah in ardayda loo adeegsado Brio ay u adeegsadaan isku diyaarinta xirfadaha shaqo ee maqalka waxay si cad u muujinayaan isku xirnaanta Brio," ayuu yidhi Mike Reddick, Maamulaha Iibka Caalamiga ah, Calrec. “Maahan wax fudud oo loogu talagalay idaacadaha; waxay waxtar u leedahay codsiyada badan iyo abaalmarinada laxiriirta kuwa bartey akhlaaqda maqalka ah. ”
Calrec Audio wuxuu si gaar ah ugu heegan yahay heer sare ah ee isku darka maqalka iyo hawada ku nool. Khabiir ku takhasusay baahinta muddo ka badan sanado 50, Calrec wuxuu soo saaray dhowr nooc oo kombuyuutarro ah oo lagu kalsoon yahay oo ay ku tiirsan yihiin kuwa ugu guulaystay caalamka. Kantaroolatada sii kordhaysa waa qaybaha aasaasiga ah ee shabakadaha guud ee xarumaha ah, taas oo kordhinaysa hawlaha la qabsashada, kheyraadka la wadaago iyo awoodda si sahlan loo ballaariyo. Laga bilaabo bilawga, Calrec wuxuu abuuray xalal cusub oo u oggolaanayay inay sii daayaan farsamoyaqaannada si ay u horumariyaan habka shaqadooda ayna uga helaan qiime ka weyn qalabkooda. Xalalka codka ah ee cod bixinta, ayaa waxay ku dhajiyaan kalsoonida Calrec. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa calrec.com.
Raac Calrec Audio:
Udoodar Ololaha Caafimaadka Aurora / Colonie isku dhafka codka AVID Broadcast Engineer Broadcast Engineering Calrec Audio Calrec Brio36 Digital Audio Console tafatirka film Graham Chapman Prmoted toEditor wax soo saarka live wax lagu qoro Spears & Fiilooyinka television Colonie The Colonie - News COLONIE / Chicago Ultra HD Forum Video Engineer	2019-12-03
Previous: Injineer Hardware (FPGA)
Next: J / KAM Digital Standardizes waxay la ciyaareysaa JVC Monitors